Andravoahangy: ahiana ny kolikoly amin’ny fananganana Box | NewsMada
Andravoahangy: ahiana ny kolikoly amin’ny fananganana Box
Velon-taraina ireo mpivarotra solomaso etsy Andravoahangy amin’ny mety hisian’ny kolikoly eo amin’ny filohan’ny fikambanana mpisolo toerana sy ny kaominin’Antananarivo Renivohitra.
Tafiditra tao anatin’ny fifanarahan’ny kaominina sy ny mpivarotra solomaso ny hanangana toeram-pivoahana sy birao ao an-toerana. Hatao izany hisian’ny fahadiovana sy ny firindran’ny asa varotra solomaso.
Amin’izao fotoana anefa, tsy misy ny fanamboarana toeram-pivoahana sy birao araka ny fifanarahana. Box efatra izay voalaza fa an’ny filohan’ny fikambanana mpisolo toerana no hatsangana eo amin’ilay toerana tokony hanaovana izany.
Nahazo fahazoan-dalana soamatsara avy any amin’ny kaominina ny fanorenana izany Box efatra izany ka izay no nahataitra ireo mpivarotra solomaso etsy Andravoahangy.
Nandika ny fifanarahana ny kaominina ary nivadi-pitokisana ny filoha vonjimaika. Manahy mihintsy ny ety hisian’ny kolikoly eo amin’ny roa tonta ny fikambanamben’ny mpivarotra sosomaso. Miantso ny tompon’andraikitra izy ireo araka izany hijery akaiky ny fandehan’ny raharaha eny an-toerana ka hampitsahatra ny asa tsy tafiditra ao anatin’ny fifanarahana izay hananan’izy ireo taratasy ara-dalàna.